TAABID CABDI oo Beesha Wacbuudhan Abgaal ku qanciyay inuu Degmo ugu dhigi doono degaanka Garasbaaley | Newsomali
TAABID CABDI oo Beesha Wacbuudhan Abgaal ku qanciyay inuu Degmo ugu dhigi doono degaanka Garasbaaley
Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed ayaa doonaya inuu degmo cusub u magacabo degaanka Garasbaaley oo ku yaalla duleedka Muqdisho loo aqoonsado Degmo buuxda oo ka tirsan Gobolka Banaadir.
Wax ka yar 48 saac oo uu xafiiska joogo ayuu Mr Taabid Cabdi Maxamed bilaabay inuu ku dhaqaaqo talaabo loo arko eex iyo ka fogaansho maamul wanaag.
Xildhibaano, siyaasiyiin iyo waxgarad kasoo jeeda beeshiisa ayaa dib u soo nooleeyay olole lagu doonayo in degaanka Garasbaaley oo ku yaalla duleedka Muqdisho loo aqoonsado Degmo buuxda oo ka tirsan Gobolka Banaadir.
Dowladdii Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa Arrintan ku fashilantay waxaana la isku deeyay in degaankan laga dhigo degmo hase yeeshe Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Taabid Cabdi ayaa waxaa uu doonaya inuu kaga faa’ideysto fursadan xiriirka uu la leeyahay Madaxweyne Farmaajo iyo abtigiisa Ra’iisal Wasaare Xasan Kheyre.
Dowladii Xasan Sheekh ayaa dhibaato weyn kala kulantay degmonimada Kaxda oo sharci ahaan aan waafaqsaneyn dastuurka KMG ah, laakiin beesha degta degaankaasi ay meel marisay, waxaana la xusuustaa dhibaatadii kasoo wajahday guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Xasan Muungaab.
Iyadoo xilligan ay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha kasoo jeedaan beelo kale ayaa hadda laga yabaa in ololaha degmonimada Garasbaalley uu shaqeeyo, laakiiin waxaa hogaanka degmada cusub hore isugu qabsaday saddex beelood oo kala duwan.